Baqattoonni Itiyoopiyaa Sudaan Keessa Jiran Weerarri COVID-19 Ka’uu Mala Yaaddoo Jedhu Qabaachuu Ibsaa Jiran
Muddee 03, 2020
Faayilii - Baqattoota Itoophiyaa mooraa baqattotaa Sudaan keessati yeroo nyaanni hiramu dabaree eeggatan
Lammiiwwan Itiyooopiyaa kanneen waraansa naannoo Tigraay jalaa dheessanii mooraalee Sudaan keessa qubatanii jiran weerara COVID-19 saaxilamuu malu soda jedhu uumee jira. Ammaaf namni vaayiresichaan qabme hin jiru, garuu yaaddoon jiru guddaa dha.
Baatii darbe keessa lammiiwwan Itiyoopiyaa 40,000 ta’antu lola Tigiraay keessaa baqachuu dhaan mooraa Sudaan gama bahaa jiru keessa dahatanii jiru. Kanneen gamas seenan mooraalee sadii kan magaalaalee Qadriif fi Kasalaa keessa qubatanii jiru.
Kan umuriin waggaa 32 Tesfaay Alleey fi haati warraa isaa ulfi waraansa sana jalaa baqachuuf Humeraa irraa kan godaanan yoo ta’u amma garuu mooraalee sana keessaa tokko keessatti weerarri COVID-19 isaan mudachuu mala.
Homiraa keessaa vaayiresiin koronaa hangi tokko mudatee jira. Garuu mootummaa dhaan to’atameera. Sababii lolli naannoo sana jiruuf gara Sudaanittan baqadhe jedhe.
Haa ta’u malee sababaa haala jireenya mooraa keessaan kan ka’e tamsa’ina COVID-19, kutaa keessa jiraatanii fi hanqina bishaanii ilaalchisee yaaddoon qaba jedhee jira.
Amerikaan torbaan lamaan duubatti qorsa dhaabii fayyaa Pfizer/BinTech COVID-19f hojjjatan haaraan namaan wallaanuu jalqabdi
Tigraay keessatti akka dhaabii Telekoom Itoophiyaa jedhetti lafa haga tokkotti tajaajila bilbilaa deebi’ee hujiittiin jiran
Dr Dirribaa Waaqijiraa Eega Poolisiin Manaa Qabamanii Gara Baatii Tookkoof Akka Hin Argiin Dubbatu, Maatii Keessaa
Har’a Finfinnee Keessatti Boombiin Dhohe, Jedha Poolisiin Magaalattii
Namoonni Yaaddoo Nageenyaa Qabnu Irraa Anfilloo Irraa Buqqaane Jedhan Gaambellaa Buufatanii Akka Jiran Dubbatu